UXiaomi uvula eyona Mi Store inkulu eYurophu eParis | Zonke iinkonzo ze-intanethi
UXiaomi uvula i-Mi Store enkulu yaseYurophu eParis
IXiaomi isandula ukuvula iVenkile yayo enkulu eYurophu. Ivenkile entsha ivulwe kwisitalato iChamps-Elysees, eParis, eFrance, emva kwemini namhlanje.
Ngaphandle kwento yokuba okwangoku imo yezulu ayisiyonto ifanelekileyo edolophini, inani eliqhubekayo labantu belimi phambi kwevenkile iiyure ngaphambi kokuvulwa, belinde ithuba lokuchukumisa ezinye zeemveliso zeXiaomi.
Kwimeko apho ungazi Olu luhlu lwesibini lweMi vula eParis, eFrance. Indawo entsha yenkampani yaseTshayina iya kuthengisa ii-smartphones, kodwa kunye nezinye iimveliso zenkampani ephezulu. Kuya kubakho ii-headphone, iikhamera ze-Yi kunye neemveliso zekhaya ezi-smart. UXiaomi ukwasile nokwazisa okunomdla kwivenkile yakhe yaseFrance kwi-Intanethi kuye wonke umntu ongenakho ukuba seParis ngeli xesha. (Fumanisa: Uluhlu lweevenkile zeXiaomi eSpain: Lonke ulwazi malunga nazo)
Ukunyusa kubhekisa kuphela kwicandelo le-smartphone: isixhobo Yam Max 3 ifumaneka nge-euro ezingama-220 kuphela, ngesaphulelo sama-euro angama-50; i I-Pocophone F1 inokuthengwa nge-euro ezingama-320 kuphela, ngesaphulelo sama-euro angama-40, kunye nemveliso yenkwenkwezi Xiaomi Mi 8 Ihlala kuphela i-430 euro emva kokuncitshiswa ngama-euro angama-50 kwiivawutsha zam njengesipho sokuthenga.
Siyabona ukuba ivenkile ijongeka kanjani enkosi kumfanekiso othunyelwe kwi-Twitter. Kwifoto, ungabona ngokucacileyo ubukho beefowuni ezahlukeneyo evenkileni, ezinje ngexabiso eliphantsi Xiaomi Pocophone F1, I-Redmi Qaphela i-6 Pro kunye neXiaomi Mi 8, kunye nezinye iimveliso ezinje ngeprojektha yeMi Laser kunye neefowuni.
Oku kuqinisekisa ukwanda kunye nokuzibophelela kwenkampani eYurophu. Uninzi lwabathengi bayo luvela kwingingqi, hayi i-China kuphela. Ngapha koko, ngokuqinisekileyo yintengiso yayo yesibini ngobukhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » UXiaomi uvula i-Mi Store enkulu yaseYurophu eParis
I-Pocophone F1 ifumana iNdlela yoBume boBusuku kunye nenkxaso yokurekhoda kwii-960 fps
Uyikhuphela njani iMidlalo yokuSinda, iXiaomi entsha yeDabi Royale